Gudoomiyaha Gaadiidka T Transportrk Albayrak 'Addoomada Sarkaalka Turkiga Sharafta Leh' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraAlbayrak, Madaxweynaha Türk Ulasim-Sen wuxuu yiri, 'Waxaan nahay addoommadii sarkaalkii sharafta lahaa ee Turkiga.'
26 / 11 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, WADADA, TURKEY
waxaad tihiin addoommada sarkaalka guud
Turkey Kamu-Sen dalladda Madaxweynaha oo ka mid ah Midowga reer Turkish Gaadiidka Nurullah Albayrak, Mustafa ku saabsan waxqabadka ururka iyo qaybta gaadiidka aasaasay Habernediy waaWuxuu la hadlay.
Turkey hoos imaanaya hoggaanka Public Shaqaalaha Foundation, aasaasay Turkey ee 1992 sano gudahood Turkey Kamu-Sen-Sen Gaadiidka; Shirkadda waxay qabataa howlo kaladuwan si ay u ilaaliso oo u ilaaliso xuquuqaha shaqaalaha qaybta gaadiidka ee ka shaqeeya garoomada, jidadka tareennada iyo dekedaha, iyo in la hubiyo abaabulka shaqaalaha ka shaqeeya aagaggaas.
Hizmet Waxaan nahay addoommada sarkaalka sharafta leh ee Turkiga ”
Albayrak dhigay qoraal ah oo ku saabsan taariikhda iyo shaqada ee ururka, "First of dhan, waxaan, magaca Turkey Kamu-Sen in our gobolka, magaca ummadda Soomaaliyeed ee Turkish Gaadiidka-Sen nool sharaf ammaanta leh oo ay saarnaayeen ku casaabadiisa saraakiisha Turkish. Mabda'yadu waa in aan ula dhaqanno ujeeddada waddankeenna marka hore. In Turkey 1989 ah dhaqdhaqaaq bilaabay by Foundation of Shaqaalaha Dawladda, urur la aasaasay by Ali Işıklar hogaanka. Markaas 1992 la aasaasay Turkey Kamu-Sen. Intii lagu jiray dalladda Kamu-Sen, Ururka Gaadiidka Turkiga waxaa la aasaasay khadkeenna ganacsi ee 11. Tüvasas labada tareenada iyo garoomada diyaaradaha, waxaan aasaasay la leenahay dhaqan oo muhiim ah sida Jamhuuriyadda Turkey iyo TÜDEMSAŞ Tulomsas, codkii dhammaan shaqaalaha, waxaanan weli la neefsanayo. "Waxa uu sheegay.
Ururada xubno ka mid ah garoomada diyaaradaha Turkiga ee guud, tareennada, dekadaha badda, TCDD, Inc. Albayrak wuxuu caddeeyay inay ka kooban tahay shaqaale sida Agaasinka guud iyo Wasaaradda Gaadiidka.
Dadka awooda lihi waa inay shaqada keenaan ”
Markii aan xasuusiney shilalka dhowaan dhacay ee tareenka, Albayrak wuxuu yiri: “Marka ugu horeysa waxaan u baahan nahay inaan eegno aasaaska, waxaan u baahanahay inaan si fiican u baarey… Iyadoo aan loo eegin magacaabidda, luqadda, diinta, aragtida siyaasadeed, dariiqa iyo sharciga sharci ee dadka yaqaan shaqada; waxaan u baahanahay inaanu keeno dad karti u leh inay shaqeeyaan iyadoon dadka kala saarin. Gobollo badan, shaqadu waxay sii socotaa ka hor dhammaadka shaqada sababtuna tahay dib-u-habeyn saxeex ah iyo dayactir. Waxaan rabnaa in shaqada la sii wado ka hor dhamaadka, si loo hubiyo in gabi ahaanba loo furay taraafikada kadib marka shaqadu dhamaato.
Khadadka Ankara Ankara-Sivas YHT waxay shaqeyn doontaa inta lagu gudajiro Iiddii Ramadaanka ee sanadka 2020 "
Mar la weydiiyay wax ku saabsan khadka tareenka Xawaare Sare ee Ankara-Sivas iyo Ankara-Afyon-Izmir, Albayrak wuxuu yiri, "Marka hore, qandaraaska qadka Ankara-Afyon-Izmir waa la dhameystiri doonaa, laakiin sida mudnaanta Madaxweynahayaga, Wadada Ankara-Sivas… Ilaa Sivas, laga yaabee inaad aado Kars habka. Isla mar ahaantaana, waxaan u adeegsan doonnaa dariiqan saadka halkii aan ka qaadi lahayn rakaabka. Maanta, markaan fiirino magaalooyinka warshadaha ee Ankara, Istanbul, Izmir iyo gobollada xeebta. Maanta, markaan u aadno Bartamaha Anatolia, dadku had iyo goor waxay u haajiraan dhinaca galbeed. Waxaan sidoo kale daryeeleynaa khadadka Tareenka Xawaaraha Sare ee hijrada ee bartamaha Anatolia iyo u guurida dhanka bari mar labaad. Ve wuxuu yiri: Waxaan rajeynayaa in xariiqani uu shaqeyndoono Xuska Bisha Ramadaan ee 2020 ee tilmaamaha Madaxweynahayaga. Taasi waa waxa aan aaminsanahay. Waan tegey oo is-fiiriyey; Shaqadu si dhakhso leh ayey u socotaa, taas oo ina fareysa ..
Fiidiyowga wareysiga Guji
La xiriir Nurullah si toos ah
Turkey Public Shaqaalaha Foundation
shaqaalaha waaxda gaadiidka